Repoblika Demokratikan’i Kongo : Fahafatesan’Ilay Mpiaro Ny Zon’Olombelona, Floribert Chebeya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2018 14:30 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 简体中文, 繁體中文, Français, Español, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2010)
Taona miavaka ho an'i Afrika ny taona 2010, ary tsy noho ny hoe fandraisan'ny firenena Afrikana voalohany ny Fiadiana ny ho Tompondaka Erantany amin'ny baolina kitra ihany. Amin'ity taona ity, firenena enina miteny frantsay no heverina fa hikarakara fifidianana ho filoham-pirenena [amin'ny teny frantsay] ary tsy latsaky ny 17 ireo firenena mankalaza ny faha 50 taona nahazoany fahaleovantena : 14 amin'izy ireo no zanatany frantsay teo aloha, roa no nofehezin'ny britanika ary iray teo ambany vahohon'ny belza, tsy iza izany fa ny Repoblika Demokratikan'I Kongo (RDC). Kanefa nitsimbadika haka endrika tsy hay faritana ny fankalazana ny 30 jona tao amin'io firenena io satria nitarika ahiahy maro ny fahafatesan'ilay mpiaro ny zon'olombelona Floribert Chebeya.
Hita faty ny 2 jona ilay talen'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona La Voie des Sans Voix (Ny Làlan'ireo Tsy Manam-peo), Floribert Chebeya, tranga izay tsy mbola fantatra ny antony. Araky ny voalazan'ny Amnesty International, ny 1 jona i Chebeya no tokony hihaona tamin'i Jeneraly John Numbi, inspektera jeneralin'ny polisy. Nandefa hafatra fohy ho an'ny vadiny izy nilazàny fa ao amin'ny biraon'ny polisy izy miandry an'ilay jeneraly hihaona aminy. Ora vitsy taty aoriana, nandefa hafatra fohy hafa izy nilazàny fa handalo vetivety any amin'ny Oniversite izy alohan'ny hodiany; io no hafatra farany nalefany. Ny ampitson'iny, mpandalo no nahita ny vata mangatsikany tao amin'ny seza aorian'ny fiarany tany amin'ny faritra ambanivohitr'i Kinshasa. Nanjavona ny mpamiliny ary tsy nahitàna ratra hita maso na diam-bala ny vatany, na dia nisy soritra rà kely ihany aza teny amin'ny lavak'orony sy ny sofiny.
Nandritra izay roatokom-bolana izay, io fahafatesan'i Chebeya io no toa lasa pitik'afo hamoahan'ny olona ireo toedraharaha anatiny ao RDC. Ny fanadihadiana momba ny fahafatesany no nampiharihary ireo fitoriana manao ranolava momba ny vono olona, ny fanolanana [amin'ny teny anglisy] sy ireo maro hafa fanitsahana ny zon'olombelona, avy amin'ny ady manodidina ny harena an-kibon'ny tany ao an-toerana ny ankamaroan'ireo habibiana ireo izay mahakasika ireo firenena Afrikana miteny frantsay hafa ihany koa .
Nikasa ny hanatanteraka ny fandevenana ny 30 jona 2010 ny fianakavian'i Floribert Chebeya ho fanehoana ny fitroarany, kanefa noho ny fanerena nataon'ny governemanta sy ireo diplomaty dia nanaiky ny fianakaviany ny handroso ilay daty ho ny 26 jona .
Mafana fo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona efa hatramin'ny taona 90, nankalazain'ireo fikambanana iraisam-pirenena maro sy nanaovana fihetsiketsehana teny an-dalambe nanerana izao tontolo izao i Floribert Chebaya. Ny 8 jona, taratasy mivelatra iray [amin'ny teny anglisy] nosoniavinà fikambanana iraisam-pirenena mihoatra ny 50 isa no nalefa ho an'ny Filoha Joseph Kabila, manery azy sy ny mpiara-miasa aminy hanokatra fanadihadiana tsy miankina mbà ahitàna mazava ny amin'ny nahafatesan'i Floribert Chebaya. Nanantanteraka hetsika manoloana ny Ambasadin'i RDC ireo kongoley mpila ravinahitra any Bruxelles :
Lahatsary maneho ilay hetsika ho an'i Floribert Chebaya tao Bruxelles
Ny 24 jona, nizara lahatsoratra mitanisa ny vaovao farany mikasika iny raharaha iny ireo mpanoratra ao amin'ilay blaogy Friends of Congo (naman'i Kongo) ary nanambara hoe :
Rikoriko amin'ny fahalasànan'i Floribert Chebeya izahay, mafana fo iray amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fanarahan-dalàna ao Kongo. Maro ireo soritra hita maneho fa manao izay hanakombonam-bava ny mponina ny fitondrana mpamoritra an'i Kabila mba hifikirany eo amin'ny fitondrana amin'ny fomba rehetra.
Tamin'ny herintaona, nandefa lahatsary tanaty Youtube ny ONG Human Rights Watch, lahatsary izay tena nanakiana be ny toedraharaha misy marina ao RDC :
Ny demokrasia ao Kongo , avy amin'ny Human Rights Watch
Ny volana Febroary 2010, nozarain'ny ny Amnesty International ny lahatsoratra iray mikasika ny famoretana, ny fandrahonana , ary ny fisamborana tsy ara-drariny an'ireo mafana fo mpiady ho an'ny zon'olombelona ao RDC. Niresaka an'i Floribert Chebeya ilay lahatsoratra, izay niharanà fandrahonana maro, fisamborana sy fidirana am-ponja tsy an-drariny.
Ho an'ireo Kongoley mpila ravinahitra ao Bruxelles, ny 30 jona 2010 dia midika ho andron'ny fanoherana. Nanomboka ny volana Martsa 2010, fikambanana maro isan-karazany no miezaka mikarakara hetsika ho atao eny amin'ny araben'ny renivohitra belza ka hifarana eo anoloan'ny masoivohon'i RDC, mba ho lasa hetsika lehibe ilay izy. Ary ho antsoin'izy ireo hoe « No Kabila Day » (« Andro tsy misy Kabila ») ilay hetsika, izay heverina fa hafatra mazava hoan'ny filoha Kabila sy ireo mpiara-miasa aminy. Ankehitriny , manantena ireo Kongoley mpila ravinahitra any Lausanne (Soisa) sy any Londona (Royaume-Uni) ireo mpikarakara mba hanao hetsika mitovy amin'izany koa amin'io andro io.
Tao amin'ny blaoginy, iray amin'ireo mpitarika ilay fanentanana ao Bruxelles no nanoritsoritra ny tanjon'ilay hetsika :
Tianay ny hanohitra ilay fanjakana jadona, mpamono olona, sy mpampihorohoro entin'i Joseph Kabila ary hikarakara NO KABILA DAY (Andro tsy misy Kabila) iray mandra-pialàny, isaky ny 30 jona, izay daty fankalazàna ny nahazoan'i Kongo fahaleovantena, mba hampahatsiahy ny olona manerana izao tontolo izao fa mampidi-doza ho an'ny mponina Kongoley io mpanao jadona io, fa koa ho an'ny mponina ao Afrika Afovoany sy ho an'izao tontolo izao. Antenainay ny hahangona olona mihoatra ny iray tapitra manerana izao tontolo izao.
Jason Stearns blaogera avy ao Congo Siasa dia nizara ito lahatsoratra manaraka ito, ny 9 Jona :
Koa dia inona ary izany ny zavatra niova hatramin'ny nahafatesan'i Chebaya ? Aloha loatra angamba ny filazana izany amin'izao, kanefa amin'ny fotoana tsy ampoizina no hitrangan'izany, herinandro vitsy alohan'ny fankalazàna ny fetim-pirenena sy ny fanapahankevitry ny FMI mikasika ny trosan'i Kongo. Ankoatra izay, mety hampitriatra ny fifandraisan'ireo mpiray tsikombakomba akaiky amin'i Kabila io raha toa ka voampanga ho mpamono olona i John Numbi, ilay Inspektera jeneralin'ny polisy .
Manoloana io fisafotofotoan-draharaha io, ary amin'izao 30 jona efa manakaiky izao, manantena ilay mpampiasa Twitter, Kambale, fa tsy ho adinon'ireo Kongoley mora foana i Floribert Chebeya ka mampahatsiahy antsika hoe :
Tsy mampino ny fanadinoan'ireo Kongoley an'i Floribert Chebeya sahady ka nitodihan'izy ireo nijery ny fiadiana ny ho tompondaka erantany. Tsy atolotra fotsiny ny fahafahana, fa mila takiana!
7 andro izayEritrea